जुन फिल्म खेल्दा कंगनाको हड्डी भाँचियो, त्यहि फिल्मले तोड्यो’रेकर्ड - Gaunbeshi
जुन फिल्म खेल्दा कंगनाको हड्डी भाँचियो, त्यहि फिल्मले तोड्यो’रेकर्ड
Posted on १३ माघ २०७७, मंगलवार १४:४६ Author Gaunbeshi Comment(0)
मुम्बई । अभिनेत्री कंगना रनौतको फिल्म ‘मणिकर्णिकाः द क्वीन अफ झाँसी’ को रिलिज भएको दुई वर्ष पुगेको छ । फिल्मको निर्देशन समेत कंगना आफैले गरेकी थिइन् । फिल्म २५ जनवरी २०१९ मा रिलिज भएको थियो ।
फिल्म रिलिज भएको दुई वर्ष पुगेको अवसरमा कंगनाले एक ट्वीट गर्दै दुई तस्बिर एकसाथ सार्वजनिक गरेकी छन् । ती मध्ये एक तस्बिरमा कंगनाको खुट्टामा प्लास्टर लगाइएको र उनी ह्वील चेयरमा देखिएकी छन् भने दोस्रोमा उनको निधारमा चोटको निसान छ ।
उनले ट्वीटमा लेखेकी छन् ‘जिस फिल्ममा मेरो हट्डी भाँचियो, त्यही फिल्मले कयौं रेकर्ड समेत तोड्यो ।’ यो जापानमा समेत भारतको सबैभन्दा सफल फिल्म सावित भएको उनको ट्वीटमा उल्लेख छ । कंगनाले एक भिडियो समेत शेयर गरेकी छन् ।
जुन भिडियोमा अमिताभ बच्चनको आवाजमा मर्णिकर्णिकाको कथा प्रस्तुत गरिएको छ । भिडियोमा अंकिता लोखन्डे, सुरेश ओबरोय, जीशु सेनगुप्ता, अतुल कुलकर्णी सहित अन्य फिल्मका सबै स्टार छन् ।
कंगनाले अगाडि लेखेकी छन्– ‘कयौं यो फिल्म सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक फिल्म भनेका छन् । तर म यसलाई विश्वस्टरको फ्रेन्चाइज बनाउने बचन दिन्छु ।’ यसको अलवा कंगनाले एक भिडियो समेत शेयर गरेकी छन् । जसमा तरवार चलाइरहेको क्लिप समेटिएको छ ।
पीरियड ड्रामामा आधारित यो फिल्म रानी लक्ष्मीबाईको जीवन, शासन र अंग्रेजसँगको लडाइको बिषयमा थियो । फिल्मका कंगनाको साथमा जिशु सेनगुप्ता, अतुल कुलकर्णि, मोहम्मद जीशान, अंकिता लोखन्डेलगायको मुख्य भूमिका रहेको थियो ।
एउटा चुम्बनको दृश्यले ल्यायो दीपिका–रणवीरलाई नजिक, ६ वर्षको सम्बन्धपछि गरे विवाह
Posted on २९ माघ २०७७, बिहीबार ०८:५२ Author Gaunbeshi
एजेन्सी । भ्यालेनटाइन्स डे नजिकिँदै छ । यस्तोमा आज हामी बलिउडका सबैभन्दा चर्चित जोडीमध्ये एक रणवीर सिंह र दीपिका पादुकोणको प्रेम कहानीबारे जानकारी लिँदै छौं जुन निकै फिल्मी छ । रणवीर र दीपिकाले १४ नोभेम्बर, २०१८ मा कोंकणी रीति–रिवाजमा इटलीको लेक कोमोमा विवाह गरेका थिए । विवाह अघि यी दुईले एक–अर्कालाई ६ वर्षसम्म डेट गरे […]
अत्यन्त सुन्दर देखिने यी ५ अभिनेत्री वास्तविक जीवनमा यस्ता देखिन्छन्, चिन्नै गाह्रो पर्छ !
Posted on ८ फाल्गुन २०७७, शनिबार १४:४८ Author Gaunbeshi
एजेन्सी । ठूलो पर्दामा त हामी सबैले अभिनेत्रीलाई मेकअपमा देखेका हुन्छौं। यस्तोमा धेरै मानिसमा यी अभिनेत्रीहरू अक्सर बिना मेकअप कस्ता होलान् भन्ने लाग्न सक्छ। कतिपय समय तपाईं यो पनि सोच्नु हुन्छ होला कि यी अभिनेत्री बिना मेकअप पनि त्यत्तिकै सुन्दर देखिन्छन् जति सुन्दर मेकअपमा देखिन्छन्। तपाईंको यस्तो प्रश्नको उत्तर यो लेखमा पाउनुहुनेछ। ९० का दशकका […]
श्वेतासंग वि’वादपछि लाखौ खर्च गरेर सुष्माले आफ्नो जन्मदिन मनइन ,को को सहभागी भए त ?
Posted on ३ फाल्गुन २०७७, सोमबार १५:२० Author Gaunbeshi
काठमाडौँ । नायिका सुष्मा कार्कीको हिज ज’न्मदिन परेको छ। १९८५ फेब्रुअरी १४ तारिखका दिन उनको ज’न्म भएको थियो। बर्दिया जिल्लामा ज’न्मिएकी सुष्माले ‘मेरो एउटा साथी छ’ चलचित्रबाट चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुन्।मो’डलिङ्ग हुँदै चलचित्रमा लागेकी उनले दर्जनौं म्युजिक भिडियोमा समेत अभिनय गरेकी छिन्। चलचित्र क्षेत्रमा भने उनलाई निर्देशक सुदर्शन थापाले चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गराएका थिए। […]
बामपन्थी नेता कुँवरलाई प्रचण्डले दिए श्रद्धाञ्जलि
नेपालमा ल्याइएको कोरोना विरुद्धको खोपवाट हुनसक्छ यस्तो साइडइफेक्ट, यस्ता लक्षण देखिए तत्काल अपनाउनुपर्ने उपायका बारेमा डाक्टरको सुझाव
Posted on २४ आश्विन २०७७, शनिबार १२:२५ Author Gaunbeshi
दुई वर्ष अगाडि बे’प’त्ता भएकी महिला समुद्रको बिचमा जीवितै भेटिइन्, यसरी गरियो उद्दार, (भिडियो हेर्नुहोस्)
Posted on २३ पुष २०७७, बिहीबार १६:२५ Author Gaunbeshi
बेलायतमा मंगलबार कारोना बाट एक हजारभन्दा बढीको निधन
Posted on २८ माघ २०७७, बुधबार १९:०० Author Gaunbeshi
Posted on २० आश्विन २०७७, मंगलवार ०७:५८ Author Gaunbeshi
४४ दिनको छुट्टीमा घर आएका ईण्डियन आर्मी विवेकको बाइक दुर्घटनामा निधन
गर्भ नि’रोधक औ’षधिले बिगार्न सक्छ अनुहार
घट्यो सुनचाँदीको मूल्य, तोलाको कति
अभिनेता पलले माफी नमागे प्रदेश १ मा फिल्म चल्न नदिने चे ता व नी
पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव, मंगलबारबाट मौसममा सुधार
अमेरिकाका चर्चित गल्फ खेलाडी टाइगर वुड्स चढेको कार दुर्घटना
Posted on १२ फाल्गुन २०७७, बुधबार १०:५१ Author Gaunbeshi
३२ देशबाट १ लाख २३ हजार बढी नेपाली स्वदेश फर्किए
Posted on १२ कार्तिक २०७७, बुधबार ०८:२७ Author Gaunbeshi
पाथिभरा माताको दर्शन गरि माघ २० गते मंगलबार राशिफल हेर्नुहोस्
Posted on २० माघ २०७७, मंगलवार ०६:४० Author Gaunbeshi